Archive du 20180330
Depiote Rabetafika Roberthine Nitantara ny nafenina
Nanao fanambarana sy nitondra fanazavana momba ny raharaha fiparitahan’ny sary sy ny horonantsary mamoafady tamin’ny tambajotran-tserasera sy ny antony nahatonga izany ny Depiote voafidy tany Isandra Rabetafika Roberthine.
Tsy nanadino ny fanamarihana ny tolom-pahafahana tamin’ny 1947 ny avy amin’ny antoko Arema omaly 29 martsa.
Rajoelina ao Mahajanga Ho gidragidra anio …
Ho avy any Mahajanga ny filohan’ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina anio hiatrika ny fitokanana lalana nataon’ny kaominina, araka ny fanasana nataon’ny Ben’ny tanàna Mokhtar Salim Andriantomanga sy ny mpiara-miasa aminy.
Kajikajy politika Lehiben’ny distrika 11 no indray nesorina
Lehiben’ny distrika miisa 11 no indray nesorina nandritra ny filankevitry ny minisitra ny alarobia 28 martsa teo, dia ny tao Ambilobe,
Difotry ny adim-piainana Tsy dia fantatry ny olona ny Tolom-panafahana 1947
Tsy dia fantatry ny olona loatra amin’ny ankapobeny, indrindra fa ny tanora ny tantara fonosin’ny datin’ny 29 martsa 1947, izay notsaroana omaly, nisian’ny tolom-panafahana namoizan’ireo Malagasy maro ny ainy mihitsy, mba hiverenan’ny fahaleovantena.
Orlando Raobimanana “Tsy manana dosie maloto aho ! “
“Endrikendrika sy fanosoram-potaka” fotsiny ireo vaovao niparitaka an-gazety sy tamin'ny haino aman-jery mahakasika ahy, hoy ny Tale jeneralin’ny Tahirimbolam-panjakana teo aloha,
Kaominin’i Mahitsy PDS izao no resaka
Nidina an-dalambe, nanery ny Ben’ny tanàna Andriambololona Rakotovao hanome fanazavana sy hanafoana ny tetika saika hivarotany ny kianja ara-panatanjahantena Mahitsy RN4 ny fokonolona ny alarobia 28 martsa teo.
Tsiaro ny tolom-pahafahana 1947 Feno fihatsarambelatsihy
Fihatsarambelatsihy no nisehoan’ny fahatsiarovana ny tolom-pahafahana 1947 raha ny tamin’ity 29 martsa indray mitoraka ity. Toa tsy misy vidiny sy tsy misy te hahalala ny lanjan’izany tolona izany, intsony fa dia endrika hafa mihitsy no isehoany.
« Formateurs » CRINFP Ampifilafilaina ny valin-kasasarany
Nafanafana tetsy amin’ny INFP Mahamasina ny harivan’ny alarobia 28 martsa teo.
Diaspora Kristianina Malagasy Mitaky ny hitsinjarana ara-drariny ny harena
Efa mampiteny ny moana ny fitotongan’ny harinkaren’i Madagasikara arahin’ny fihazakazaky ny fahantran’ny vahoaka Malagasy, nefa dia mampiaiky an’izao tontolo izao ny harena tsy hita pesimpesenina misy eto ary mahay sy nianatra ary kinga saina ny Malagasy.
Kitra - Ligy Matsiatra Ambony Nahemotra ny fiadiana ny tompondaka
Noho ny fifidianana filohan’ny ligy tsy mbola vita sy araka ny taratasy voaray avy amin’ny federasiona izay milaza fa ny ligy am-perinasa ihany aloha no manohy ny asa mandrapahavita ny fifidianana sy ny famindrana asa, dia ny faran’ny herinandro lasa teo, 24-25 martsa,
Ekipan’ny PSG Maniry ny hiantsoana an’i Zidane i Neymar
Vao omaly isika no nahatsiaro ireo Raiamandreny « naherifo » sy « tia tanindrazana » nivonona ny hamoy ny ainy tamin’ny taona 1947 mba hahazoan’ity nosy ity fahaleovantena sy mba hiadanan’ny faramandimby.
Fitaterana – Zotra Arivonimamo Mifanenjana ny mpitatitra sy ny ATT
Nanao fitokonana faobe ireo kaoperativa miisa dimy manao zotram-pitaterana mampiasa ny lalam-pirenena voalohany. Nitarika izany ireo mihazo an’Arivonimamo, izay nanafoana tanteraka ny fitaterana mihitsy na dia fety aza ny andro raha tsy mahazo valiny mahafa-po avy amin’ny Antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety (ATT).
Fandidiana maimaimpoana Nisitraka izany ireo vaky lanilany
Marary manana fahasamponana toy ny sima sy vaky lanilany miisa 150 mahery no misitraka ny fandidiana maimaimpoana ataon'ny Santé Plus Antsirabe sy ny fikambanana Les enfants de Noma avy any Frantsa.
Orinasa HBSN Miahy ny hatsarana ara-boajanahary
“Notre priorité est votre bien être naturellement.” Ny hatsaranao amin’ny alalan’ny fampiasana ireo vokatra natoraly no filamatry ny orinasa HBSN na « Huile de beauté et soins naturels ».
« Sahamaitso » Manome lanja ny vokatra Malagasy
Sambany no hisy tsenabe entina hanasongadinana ny asa tanana Malagasy sy vokatry ny tany ny 01 sy ny 02 aprily ho avy izao eny Ombalahivato Ambohimalaza ao anatin’ilay hetsika “Sahamaitso” andiany voalohany.
FANAMARIHANA NY 29 MARTSA
Feno 71 taona ny tolom-panafahana 1947 ka nanatanteraka fametrahana fehezam-bonikazo tetsy Ambohijatovo ny praiminisitra lehiben'ny governemanta, ny filohan'ny Antenimierandoholona ary ny Ben'ny tanànan'Antananarivo Renivohitra izay nitarika ny fametrahana voninkazo teo amin'ity tsangambato ity.
Nanoloana ny zava-niseho mikasika ny mpikambana iray eo anivon’ny Antenimieram-pirenena izay niparitaka tamin’ny tambajotran-tserasera moa ny sariny mitanjaka dia niantso ny rehetra ny filohan’ny Antenimieram-pirenena, Jean Max Rakotomamonjy, mba ho tony.
Fitiavan-tanindrazana Nivaona ny ankehitriny
71 taona izay no lasa sy nahatsiarovana hatrany ny zava-nisy tamin’izany.